एमालेका मेयरलाई यसरी घोक्रेठ्याक लाएर बैठकबाट निकाल्दिए ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमालेका मेयरलाई यसरी घोक्रेठ्याक लाएर बैठकबाट निकाल्दिए !
मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यक्रममा वडाध्यक्षलाई नगर प्रहरी लगाएर बैठकस्थलबाट बाहिर निकालिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा बैठकबाट ४ नम्बरका वडाध्यक्ष गोविन्दबहादुर भण्डारीलाई नगर प्रमुख (मेयर) दिलिपकुमार राईले नगर प्रहरी लगाएर गलहत्त्याएका छन् ।
‘१ वर्षमा नगरपालिकामा ४२ लाख रुपैयाँको इन्धन खरिद भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘३ महिनादेखि यत्रो इन्धन कसरी प्रयोग भयो ? कसकसले प्रयोग गरिरहेका छन् भनेर सूचना माग्दा नदिएपछि कार्यक्रममा कुरा उठाउँदा मलाई नगर प्रहरी लगाएर बाहिर निकालियो ।’
५० लाख रुपैयाँको फर्निचर खरिद गरिँदा ‘कार्यपालिकाको निर्णय खै’ भन्दा मेयरले ‘यसलाई निकाल’ भनेपछि ३ जना नगर प्रहरी आएर लछारपछार पार्दै कार्यक्रमस्थलबाट निकालेको आरोप उनले लगाए । मेयरले कार्यपालिका बैठकमा बस्न नदिने भनेको गुनासो समेत उनले लगाए ।
तर मेयर राईले वडाध्यक्षमाथि उल्टै आरोप लगाएका छन् । जनताको कामभन्दा आफ्ना काम कहिले हुन्छ भन्ने उद्देश्य बोकेर जनप्रतिनिधिहरू हिँड्ने गरेका कारण प्रगति हुन नसकेको मेयर राईले बताए ।
‘अध्यक्षज्यूले मोटरसाइकल मर्मत गरेर बिल ल्याउनुभएको रहेछ,’ मेयर राईले भने, ‘उहाँको बिल लेखा शाखामा रोकिएको रहेछ, पैसा छिटो किन नदिएको भनेर जथाभावी बोल्न थालेपछि निकालिएको हो ।’
बिल पास नभएको भन्दै कार्यक्रमस्थलमा आएर अन्य जनप्रतिनिधिलाई पनि अभद्र व्यवहार गरेपछि सम्झाउँदा नमानेकाले नगर प्रहरी लगाएर निकालिएको राईले बताए । उनले वडाध्यक्ष भण्डारीलाई भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिए ।
वडाध्यक्ष भण्डारीले आफ्नो जिउज्यानको सुरक्षाको माग राख्दै ईलाका प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिए पनि दर्ता गर्न नमानेको आरोप लगाए । वडाध्यक्ष भण्डारीले गत साउनदेखि यता मोटरसाइकल मर्मत गरेको बिल ल्याएको स्वीकारेका छन् । १० हजार बिल ल्याएर दिँदा लेखा प्रमुखले फालिदिएको उनले आरोप लगाए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा गएर नगरपालिकामा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न माग गर्ने समेत उनले बताए ।
भण्डारी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन् भने नगर प्रमुख राई नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुन् ।